I-04 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 4, 2020
U-5,5 Bilion EURO Uqoqwe Wokugomela i-Corona Virus!
I-Global Vaccine Alliance, eyasungulwa ukusekela ukuthuthukiswa kwemithi yokugomela igciwane le-corona, yaqala ingqungquthela yayo yokuqongelela imali. Ngaphezu kwe-European Union (i-EU), amazwe anjenge-UK, Norway, Canada, Japan kanye neSaudi Arabia [Okuningi ...]
Umzuzu wokugcina: Abaluki bezinwele kanye ne-salon yobuhle bavulwa ngoMeyi 11
UMongameli Recep Tayyip Erdogan umemezele uhlelo lakhe lokujwayeza ukwenzeka ngemuva komhlangano kaMongameli weKhabhinethi. Ngokwesitatimende esisakazwa bukhoma, amabhizinisi anjengama-barberhops, abalungisa izinwele, kanye no-salon azosebenza ngomhlaka 11 Meyi. Imininingwane nguMnyango Wezangaphakathi [Okuningi ...]
Inkululeko Yokuqala Yeminyaka Engaphezulu Kwama-65 ubudala
Ngokusho kukaMongameli Erdogan ngokusakazwa bukhoma ngemuva komhlangano wekhabinet, ukubekelwa imingcele kweqembu ngaphezu kweminyaka engama-65 kancane kancane sekuphakanyiswa endaweni yokuqala. Izakhamizi zethu ezingaphezu kuka-65 zikhawulelwe kwezinye izinsuku zeviki [Okuningi ...]
Isikhathi Esichithwayo Siqedwa Emizini E-7
Ngokwesimemezelo sokusakazwa bukhoma kukaMongameli Recep Tayyip Erdogan, izicelo zokubuya ekhaya zizoqhubeka kule mpelasonto. Kodwa-ke, isikhathi sokufika ekhaya siyasuswa ezifundazweni eziyi-7 futhi kungenzeka sikwazi ukuya kulezi zifundazwe. [Okuningi ...]
Kusetshenziswe i-single Double Isicelo e-Istanbul Ankara nase-Izmir Amatekisi
Ngenhloso yokuphatha ubungozi bokubhubhisa kwe-coronavirus ngokuya ngempilo yomphakathi kanye nokuhleleka komphakathi, ukuqinisekisa ukuhlukaniswa komphakathi, ukugcina ibanga lomphakathi nokulawula ijubane lokusakazeka kwalo, [Okuningi ...]
Izincomo ezihlukanisiwe zeziguli zeCoronavirus
Ukuhlolwa kwakho kwe-Covid 19 kubonakale kukuhle, kepha izimpawu zakho zimnene noma uzizwa kahle. Ngakho-ke yini okufanele uyenze kulesi simo? Ochwepheshe bathi iziguli ezizosebenzisa inqubo yokubekwa zodwa ekhaya [Okuningi ...]
ITU Rover Team, okuyinto unmanned Ground Vehicle Design Degree Kulethe nge Turkey
Ngemoto yayo engakahlosiwe, ITU Rover Team yangena endaweni yesi-36 phakathi kwamaqembu angama-3 emiqhudelwaneni i-University Rover Challenge ehlelwe yiMars Society e-United States. Eqhubeka nomsebenzi wakhe kumarobhothi wokuhlola umhlaba [Okuningi ...]
Ukutshalwa kwemali ku-Eskişehir OBS Kuyaqhubeka Ngokuqhubekayo
UNadir Küpeli, onguSihlalo weBhodi ye-Eskişehir OSB, uthe bayaqhubeka nomsebenzi wabo njengabaphathi ukuze benze ukukhiqizwa kanye nokutshalwa kwezimboni e-OIZ endaweni enethezekile. UMongameli Küpeli uthe, "Ukuthuthuka nokuchuma. [Okuningi ...]
ICoronavirus Yathinta Umthengisi Omningi
Turkey Exporters LoMhlangano (TIM), ngokusho idatha ezikhishwe Apreli ithumela kwamanye amazwe 45 cent lemikhiqizo ye Eskisehir ku enyangeni eyedlule ngamunye, kuyilapho inani ezinyangeni ezine yokuqala yabonisa nokwehla amaphesenti 12. U-Eskişehir Ohlelekile [Okuningi ...]
I-Karakoyun Bridge Interchange ne Viaduct Qedela
I-Karakoyun Bridge Interchange neViaduct, ezodambisa umthwalo omningi weSanliurfa, isiqediwe. Imiyalo ye-Şanlıurfa iMeya yaseMetropolitan uZeynel Abidin Beyazgül, ngaphakathi kwesilinganiso sezifundo esheshisiwe yize kuqubuke igciwane le-corona [Okuningi ...]
Umsebenzi we-Asphalt Awunqabile eCarfew e-Eskişehir
Ukuqalisa ukusebenza kwe-Corona Virus Action Plan ngokuzimisela, uMasipala wase-Eskişehir Metropolitan uyaqhubeka nemisebenzi yawo ngenkathi uhlangabezana nezidingo zezakhamizi ngezinsuku zokufika ekhaya. Kulesi simo, nge-ESTRAM [Okuningi ...]
Ukuhlelwa okusha kweTarsus Çamlıyayla Yolu Umgwaqo eConak Area
Amalungiselelo amasha ayaqhubeka kuMasipala waseMersin Metropolitan eTarsus, lapho ukuhamba kwabantu eTarsus kungaphephile futhi ngokushesha. Ixhuma izifunda zaseTarsus ne-Çamlıyayla, futhi [Okuningi ...]
IKomidi Lezesayensi le-BB: 'Izinyathelo Ezijwayelekile
I-IBB COVID-19 Science Advisory Board ihlangane ngeSonto, ngoMeyi 3. Ngemuva komhlangano, isidingo sesicelo sokufika ekhaya i-Istanbul esimboza iRamadan nangaphambilini. [Okuningi ...]
Umkhankaso Olindile Wenkokhelo Useqalile! Ngabe Isebenza Kanjani?
UMongameli we-BBB u-Ekrem İmamoğlu wethule uhlelo “lokumiswa kwe-invoice” kubahlengikazi bakhe ababesezinzima enqubweni yobhubhane. Imininingwane yesicelo http://www.ibb.gov.tr U-İmamoğlu wathi kungafinyelelwa ngamagama alandelayo: [Okuningi ...]
Ukulethwa Kwe-Armored Mobile Border Surveillance Vehicle Ateş Kuqediwe
Izikhungo ezimbili ezibalulekile embonini yezokuvikela yaseTurkey zihlanganyele nezempi ngemoto yezokuphepha emngceleni ehamba nge-armchair, i-Ateş. I-Armored Mobile Border Surveillance, etholwa ngokubambisana neKatmerciler ne-ASELSAN, inkampani ehamba phambili yezobuchwepheshe yezwe lethu. [Okuningi ...]
Indiza Yentengiso Yokuqala Iqale kuSamsun Sivas Kalın Railway Line
Sivas-Samsun, yensimbi wesitimela wokuqala Turkey lavulwa, omunye umgwaqo emva mayelana 5 iminyaka umsebenzi nesimanje. I-TCDD evalwe ngomhlaka 12 kuJuni 2015 futhi kwavuswa amazinga ezingqalasizinda kanye nama-superstructure. [Okuningi ...]
Uzovulwa nini u-Ümraniye Ataşehir Göztepe Subway?
UMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu uhlole izifundo ezenziwa endaweni ngesikhathi sokufika ekhaya. U-amomamoğlu wenza uphenyo ngokwakhiwa kwesiza sika-metro e-Ataşehir, amanzi amdaka e-Ümraniye nepaki yezimoto enamaseke amaningi e-Üsküdar. Kusukela ngo-2017 [Okuningi ...]
Izinto eziza kuqala eMnyangweni Wezokuvakasha Zishintshiwe ..! Iningi Lamaphrojekthi Akhulisiwe ..!
Isekela le-CHP Niğde u-Ömer Fethi Gürer waletha amaphrojekthi asetshenziswa nguMnyango Wezokuxhumana Nezingqalasizinda eminyakeni eyedlule, kepha awusetshenziswanga isikhathi eside, kwi-ajenda ye-TBMM ngesiphakamiso sombuzo. Ezokuhamba ephendula isiphakamiso sikaGürer [Okuningi ...]
I-Tourism Center ye-Shopping Center eya eCumhuriyet Street Nostalgic Tram
Engxoxweni yethu noBursa Hayrettin Eldemir, uSihlalo weBhodi Yezokuvikelwa Kwamasiko Amagugu aseBursa, wavula ikhasi elihlukile lesitimela saseCumhuriyet Street phakathi kweziphakamiso ezizoletha ukuthinta ezokuhamba ngaphandle kokuqonda okusha kweBursa. Söze… “Le tram ayikaze isetshenziswe kuze kube manje,” yaqala futhi yagcizelela umsebenzi wokuvakasha: [Okuningi ...]
Isiphakamiso sokunciphisa iTrafikhi kanye nezokuvakasha zaseBursa nge-3 Touch
Iqiniso elizayo ukuthi iBursa empeleni ayilona idolobha elithandwayo njengeholide le-sand-sun. Kodwa-ke, ngeminyaka yayo engama-8 500 yomlando futhi inhloko-dolobha yokuqala ye-Ottoman, iyidolobha elihlukile ngokuya ngezokuvakasha okuyiqiniso. Ezokuvakasha ezishisayo ezedlule kanye nezokuvakasha zezempilo ziyahamba [Okuningi ...]
UDHMI Uyamemezela ..! I-Atatürk Airport Runways Bheka Kungani Abhujiswa?
I-General Directorate of State Airports Authority (DHMİ) yenze isitatimende mayelana nemigwaqo eqala e-Atatürk Airport okokuqala. Kulesi sitatimende, indlela eyizindiza eziyizigidigidi eziyi-14 ezithinte kabi i-Istanbul Airport ukufika kanye nokusebenza. [Okuningi ...]
'Ukusekelwa Ababekhona-Amabhizinisi Amancane Impilo Yemali Obolekayo' kusuka eHalkbank
Ngaphakathi esikalini sokulwa negciwane leCorona, eseliphenduke ubhubhane lomhlaba wonke futhi imiphumela yalo izwakala ezweni lethu, i-Industry, Trade, Industry kanye ne-Zimbabwe [Okuningi ...]
UMnyango Wezentengiselwano Umemezela Izilinganiso Zomhlaba zango-Ephreli
Ngokusho kwe-GTS, ukuthekeliswa kwamanye amazwe kwehle ngo-41,38% ngo-Ephreli uma kuqhathaniswa nenyanga efanayo yanyakenye futhi kwafinyelela kwizigidi eziyizinkulungwane ezingama-8 zamaRandi. Ngenxa yalubhubhane, ikakhulukazi amazwe we-EU, kubalulekile [Okuningi ...]
Izinsizakalo ezinikezwa yi-TÜBİTAK SAGE's Ankara Wind Tunnel
Imigudu yomoya ingqalasizinda esetshenziselwa ukuvivinya ukusebenzisana kwezinto ngokugeleza komoya. Izifundo ezintathu ze-aerodynamic kule miklamo ziyimodeli yezinombolo, ucwaningo lokuhlola (izivivinyo zomhubhe womoya) nezilingo zendiza, ngokulandelana. [Okuningi ...]
ETurkey Okokuqala Aircraft yenkampani yenethiwekhi TCG Testing Process Kuyaqhubeka Anatolia
Singathumela kuphela izindiza ezinophephela emhlane ezingena nge-S-400B Seahawk DSH (Submarine Defense War), njengoba kubonakala sengathi ukuthengwa kwe-F-35B fighter ngeke kwenzeke i-TCG ANATOLIAN (L-70) i-Amphibious Assault Ship kungekudala. UDeniz ekuqaleni kweminyaka engama-2000 [Okuningi ...]
Izindleko Zokungasebenzi kanye Nezimali Zokukhokha Isikhathi Esifushane ziqala Namuhla
I-Taksim ne-Şişhane Metro Stops ne-Taksim-Kabataş Kugqitshwe umugqa ojabulisayo Ngemuva kwe-16
UMnyango Ubuyekezwe Ukuphathwa Kokuqubuka Komhlahlandlela Womsebenzi
Ukusebenza Kokubanzi kumaJunction Bridged eBursa
Ukushintshwa Kwesikhathi ku-Bursaray Expeditions!
Umsebenzi uqalile ekwakhiweni komgwaqo wokuxhumana phakathi kweNtaba yase-Yıldız - Hot Hotermik kanye Nesikhumulo Sezindiza. Ngokuzibandakanya kukaMbusi uSalih Ayhan, 57 km 17 kuphrojekthi ephelele eyi-1 km. [Okuningi ...]
Indlela yokuphatha enobungani bemvelo yeMeya yase-Mersin Metropolitan uVahap Seçer inikeze leli dolobha ngesibonelo esihlangabezana nenhloso yoSuku Lwesithathu Lokuhamba Ngebhasikidi emhlabeni. UMnyango Wezokuthutha kaMasipala Wamadolobha amakhulu [Okuningi ...]